ကျွန်လူမျိုးနဲ့ပါတီအကွဲအပြဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ကျွန်လူမျိုးနဲ့ပါတီအကွဲအပြဲ
Posted by aungpanese on Aug 17, 2011 in Think Tank | 13 comments
အလုပ်ကမလုပ်ရသေးဘူးကွဲတာပြဲတာက အရင်စလာတာကမာ္ဘပေါ်မှာကျုပ်တို့နိုင်ငံကနို င်ငံရေးပါတီ
တွေဘဲ၊ ဒါကြောင်မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးသမိုင်းပြန်ကြည့်လွတ်လပ်ရေးမရခင်မီ 1946 ကစပြီးတော့ကွဲခဲ့တဲ့
သာပြောင်းသွားတယ်ကျွန်ဘဝကမလွတ်သေးဘူး၊ရိုင်းတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ကျွန်ဇာတာတော်တော်ပါတဲ့လူ မျိုးဗျ။သက်ဦးစံပိုင်ဘုရင်ကျွန်။အင်္ဂလိ်ပ်ကျွန်၊ဂျပန်ကျွန်၊1947မှာအခြေခံဥပဒေစတင်ရေးဆွဲ(1948-1962) အထိကျွန်ဘဝကလွတ်ကစ၊ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့(၁၄)နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်၊ပြည်တွင်းစစ်များရှိခြင်း ကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့၊ ကျုပ်တိုင်းပြည်မွဲရတာ၊နည်းပညာနောက်ကျကျန်ခဲ့တာ၊မတိုးတက်တာတွေရဲ့အဓိကအ ချက်တစ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရကျုပ်တို့်နိုင်ငံရဲ့ကမာ္ဘသက်တမ်း အရှည်ဆုံးပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ပါဘဲ။တခြားဟာ
နောက်ကျပြီးမှလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတီထွင်မှုတွေ၊ပြုပြင်မှုတွေအမြန်လုပ်၊နေ့ချင်းညချင်းပြောင်းလဲ သွားကြတာ၊ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာတော့(၁)တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး(၂)တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး(၃)တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်နေ ၊ပြောနေတာအခုမှ
စစ်တပ်ကလေးစာတယ်မဆိုးဘူးဗျ၊ဘောင်ဘီချွတ်၊တိုက်ပုံဝတ်ပြီးဘာညာသာလကာလေသံပေး…ပေး………ေ ပး……. ရင်းနဲ့အခုအကွဲပြဲစောင့်နေတာ………………
ကမာ္ဘပေါ်ရှိသမျှနိုင်ငံအားလုံးသာGlobalizationဖြစ်စဉ်ရေစီးကြောင်းေ တွထဲသာမျှောသွားမယ်၊ (တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း၊လူသားတွေယဉ်ကျေးလာခြင်း၊လူတန်ဘိုးမြှင့်တက်လာခြင်း၊နည်းပညာတွေမြန်မာ တွေမမြင်ဘူး၊ မကြားဘူးအောင်တိုးတက်ခြင်း)ကျုပ်တိုကတော့ချီးပုံဒိုက်ပေါ်မှာတင်ကျန်နေမဲ့လူမျိုး၊ ကျွန်ဇာတာကလည်းဘယ်လောက်ရှည်ခဲ့သလဲ၊
ကျွန်ထဲမှာဖားတတ်၊ယားတတ်တဲ့ကောင်နည်းပါးပါးသူများ ထက်ပိုသိပိုတတ်၊ပိုတော်သူကြတော့(ကျွန်တော်လို့ပြောတယ်)ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ၊ ယဉ်ကျေးမှုကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဗျ၊ပဒေသရာဇ်စနစ်ရဲ့အမွေဆိုးတွေဗျ၊ ကျုပ်တို့လူမျိုးကဗုဒ္ဓဘာသာတာ ပြောတာ၊ ဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးဗျ၊နားထောင်ရင်ကာလာမသုတ်ကိုလိုက်နာပေါ့ဗျ၊ ကျုပ်တု့်ဘာသာက တောင်းစားတဲ့သူတောင်းစားဝါဒ မဟုတ်ဘူး၊အလုပ်သမားဝါဒဗျ။အလုပ်လုပ်မှရတယ်၊အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့တောင်း
လက်ခံတယ်။ခေါင်းဆောင်မပါရင်အလုပ်မလုပ်တတ်ဘူး၊Heroကိုဘဲမျှော်တယ်၊Leaders are born. ခေတ်ကုန်သွားပြီ၊ Leaders are made. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာမွေးယူလို့၊ကျင့်ယူလို့ရတယ်။
များများမွေးပြီးလေ့ကျင့်ပေးရမှာဗျ။ဒါမှမျိုးဆက်မပြတ်မှာပေါ့။အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒေါင်လိုက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ကျင့်သုံးတာထက်အလျှားလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်က ပြိုကွဲမှုနည်းနိုင်တယ်လိုမြင်မိတယ်။
မြှောက်ရင်ဂွေးတက်အောင်ကတတ်တယ်၊ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မတွေးဆတတ်ဘူး၊ ဘယ်အစိုးရတက်တက်ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်စားရတာလို့တွေးတယ်။Civil rights
ကောင်းကျိုးခံစားရမယ်၊မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးခံစားရမယ်လို့ဆိုပြန်သေးတယ်။ အဲဒါကအလုပ်ကို ပြောတာဗျ၊ အလုပ်ကောင်းရင်ကောင်းကျိုးခံစားရမှာပေါ့။အလုပ်မကောင်းရင်ဆိုးကျိုးခံစားရမှာပေါ့ဗျ။ကံမကောင်းဘူးဆိုတာ
အဖိတ်နေ့ကျရင်မြန်မာအသံကနေပြီးတနောင်နောင်နဲ့ကြေးစည်သံလေးပေးပြီး တော့သတိသံဝေဂလေးရအောင်နိုးဆော်ပေးနေတာ၊ ခင်ဗျားတို့လူပြည်မှာမနေနဲ့နတ်ပြည်ကိုသွားကြဟိုမှာအ ရမ်းအေးချမ်းတာ၊လွတ်လပ်တယ်၊ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဒီကဟာတွေကအလကားဟာတွေသေရင်ဘာမှပါမသွားဘူးလုပ်
ကျုပ်လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ငန်းတူတဲ့ကောင်၊ဒါမှမဟုတ်အာဏာပိုင်ေ ဖာ်လန်ဖားလုပ်စားချင်တဲ့ကောင်တွေက သူပထွေးအာဏာပိုင်
အဲဒါမဟုတ်သေးဘူးဗျ၊နိုင်ငံရေးဆိုတာမွေးရာပါပရဟိတစိတ်ဗျ ၊ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်pureNGOဗျ။ (NGOပြောမှကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာ၊တွေသံသရာရှိတယ်၊ဝဋ်ကြောက်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့လူတွေအ ကြောင်းနောင်ကျမှပြောပြဦးမယ်။)ငလေးလုံးအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အလုပ်မလုပ်ဘူးဗျ၊မိမိအတွက်ကကျွဲကူးရေပါသဘောပဲဗျ၊
အများအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ပညာရှင်(Academic)တွေကိုမွေးတာတဲ့၊ကျုပ်တို့ဆီက တော့(ဒဒဒ။သုံးလုံးမွေးတာ(လူမိုက်))၊ ပညာရှင်ဆိုရင်မောင်းထုတ်၊တော်တဲ့လူဆိုရင်ထောင်ထဲထည့်၊ဒါမှကျွန်လူမျိုးကိုအုပ်ချုပ်လို့ရမှာပေါ့။
အခုလည်းမီးခိုးမထွက်တဲ့နည်းပညာနဲ ့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်ပြုနေတာ ဘယ်နိုင်ငံတွေလဲဆိုတာမသိဘူး၊ကိုယ်အချင်းချင်းတွေက
ကျုပ်တို့တတွေပြည်သူလူထုကိုAwarenessမြင့်တက် လာ အောင် Ignited mind လုပ်ပေးရမယ်၊
ငါတို့ချမှတ်ထားတဲ့မဏ္ဍိုုင်ကြီးလေးခုကို မယိုင်မလဲခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ကြမယ်လို သံဓိဌာန်ချဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့ကိုခရီးဆက်ကြမှသာလျှင်
……………ကဲဗျာပြော ရင်းဆိုရင်းနဲ့ နေ တောင်အတော်စောင်းနေပြီ။”
koshima san has written4post in this Website..
View all posts by aungpanese →
ဦးနုခေါတ်မှာဆူညံပေမည့်ပြည်သူအများစုဟာနေလို ့ကောင်းပါတယ်၊ကမာ္ဘ ့နိုင်ငံကြီးများက ဗမာပြည်ကိုရိုသေလေးစားတယ်။ဒါကြောင့်မုန် ့မှလည်းဦးသန် ့လိုပုဂိ္ဂုလ်ကUNမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်တာကိုး။
အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးတိုင်းပြည်မှ အဆင်းရဲဆုံးတိုင်းပြည်သို ့လုပ်ဆောင်သွားနိုင်သောကို ့ကိုလ်ကိုတိုင်းချစ်၊ပြည်ချစ်၊ လူမျိုးချစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သောနိုင်ငံတော် ဥေဿျှာင်ကြီးများသည်၊လူသားတယောက်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ အရှက်စိတ်များတောင်မရှိဘူးလားဟုေ မးခြင်ပါသည်။
ဗမာပြည်ကြီးဟာခေါတ်နောက်ကျတာဒင်မကသေးဘူး အကြောက်ရဆုံးကမှေင်နေတာ၊အမှောင်ထဲမှာ ဆိုဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူး၊ အသိစိတ်၊သမစိတ်၊ ညှာတာစိတ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ၊ကောင်းတာကနေလွဲရင်ဘာမဆိုလုပ်ဖို ့ဝန်မလေးဘူး။
ကျနော့အမြင်အရ၊၈လေးလုံးအချိန်ကအမှန်တော့မဆလအစိုးရက အတော်လန် ့သွားပြီ။မဟုတ်ရင်ဒီလောက်ရက်ဆက်ကြမ်း ကျုပ်တဲ့ကောင်တွေရရက်တည်းနဲ ့သမတတကောင်ဘယ်လဲပေးမှာလည်း။ မဆလအသက်ပြတ်ခါနီး၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုကအရေးပေါ်ယာယီအစိုးရဖွဲ ့လိုက်တဲ့အခါ၊ အတိုက်ခံတွေက တကွဲတပြဲမထောက်ခံကြဘူး၊ကကျီကောကာင်လုပ်နေသည်၊ မည်သို ့ဖြစ်စေဦးနုသည်ပြည်သူတရပ်လုံးကရွေးကောက်ခဲ့သော နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာငြင်းပါယ်လို ့မရပါ။
ဒီကောင်တွေကိုကြည်ပြီးစစ်သားများကရယ်ခြင်တာပေါ့၊ဝတောင်မရှိသေးဘူး ဝိလုပ်ခြင်နေတယ်၊ဒါသင်မကသေးဘူးဝတောင်မရှိသေးဘူးဝမ်းကကွဲခြင်သေးတယ်၊ စစ်သားတွေမပြောနဲ ့ကျနော့လိုမျိုးအညဒရ ဗမာပြည်ကြီးရဲ ့တတိယတန်းစားပြည်သူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြားသား တယောက်တောင်ကြည့်ပြီးရယ်ခြင်သည်။ မျက်စိအထဲတွင်အာဏာကိုသာမြင်ပြီး၊သေနတ်ကစစ်သားတွေ ကိုင်ထားသေးတယ်ဆိုတာမေ့နေတာနဲ ့တူတယ်။
ဒါကြောင့်ဒေါက်တာမောင်မောင်ငိုယိုပြီး စကားပြောသွားတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ ့ပြည်သူတွေတော့နာပြီဟု သိလိုက်ပြီ။
၁၉၉ဝကမာ္ဘပေါ်မှာအငြီမ်ချမ်းဆုံး။ အသန် ့ရှင်းဆုံးရွေးကောက်ပွဲအပြီး၊မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အပြတ်အသားအနိုင်ရရှိတဲ့အဖွဲ ့ရဲ့ခေါင်ဆောင်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်က အာဏာရခဲ့ရင်စစ်ခုံရုံးဖွဲ ့မလားလို ့မေးသည့်အခါ၊ ဖွဲ ့မှာပေါ့ အထူးသဖြင့်~ညွန် ့လိုမျိုးကောင်ဆိုပြေးမလွတ်ဘူးတဲ့ဗျ၊အမလေး ဘုရား ရေ၊သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့လူကိုသေနတ်မရှိတဲ့လူကခြိမ်းချောက်တယ်။
ပြီးဒါလည်းပြီးသွားပါပြီ၊ယခုအချိန်နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးညှိနိုင်းနေတယ၊် မတူညီသည်ကိုဖယ်ထားပြီး၊ တူညီတာကိုပူးပေါင်ဆောင်ရွက်မည်ကိုကြားရလို ့အထူးဝမ်းသာပါသည်၊ တိုင်းသူပြည်သားများနာနေတာလည်းကြာလှပြီ။
ဒါမှတကယ်ဝရှိရင်ဝိလုပ်လို ့ရပြီ၊အလင်းစတွေ ့လာပြီ။
နိုင်ငံခြားသားတယောက်သည် ဗမာပြည်ကြီးကိုစိတ်နာ၍ထွက်လာခဲ့ပေမည့့်၊ ဗမာဆန်စား၊ဗမာရေသောက်၊ ဗမာမြေမှာကြီး၊ဗမာစာသင်လါခြဲ့ပီး၊ ၎င်းကျေးဇူးကိုတော့မမေ့နိုင်ပါ၊ ဗမာပြည်ကြီးကောင်းစေခြင်ပါသည်၊အားလုံးကြိုးစားကြပါ။
Don ပြောတဲကအထဲက အန်အယ်ဒီခေါင်းဆောင် (ဦးကြည်မောင်)ကို သတင်းထောက်က အာဏာရရင် စစ်ခုံရုံးဖွဲ့မလားမေးတော့ ဖွဲ့မှာပေါ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ တလောကတင် ပြည်ပမီဒီယာတွေမှာ အဲသလိုမပြောခဲ့ကြောင်း ဖတ်ရပါတယ်။ ဒုသမတဦးတင်အောင်မြင့်ဦးရဲ့ အတိုက်အခံတွေ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ခုံရုံးတင်ဖွဲ့ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် အာဏာမလွှဲခဲ့ရပါဘူးဆိုတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြောဆိုချက်အပြီးမှာ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ ဦးကြည်မောင်က အဲသလိုဖွဲ့ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောခဲ့တာကို ဗိုလ်ခင်ညွန့်က လိုရာဆွဲသုံးသွားတာပါလို့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသုဝေနဲ့ အန်အယ်ဒီလူကြီးတယောက်က ပြန်လည်ငြင်းချက်ထုတ်သွားပါတယ်။ မသိလိုက်သူများ ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားမှာဆိုးလို့ ပြန်လည်ဆွေးနွေးလိုက်တာပါ။
သဂျီးခင်များ..အဲဒီအင်တာဗျူးမူရင်းနဲ့ တလောက အင်တာနက်မီဒီယာတွေမှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆက်နွယ်အကြောင်းအရာတခုခု တွေ့ရင်ကွန်းမန်နောက်ဆက်တွဲ လိုက်ပေးစေလိုပါတယ်။
ခုံရုံးကြောင့် NLD အာဏာနှင့်လွဲဟု ကော်မရှင်ပြော
လင်းသန့် Friday, 29 July 2011 18:02
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) သည် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း စစ်ခေါင်းဆောင်များကို နိုင်ငံတကာ နျူရင်ဘတ် ခုံရုံးတင်ကာ အရေးယူရန် ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် အာဏာ အလွှဲမခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု နေပြည်တော်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌသစ် ဦးတင်အေးက ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဦးကြည်မောင်ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်က တွေ့ရပုံ။ “နျူရင်ဘတ်လို ခုံရုံးမျိုး မလိုပါ” ဟူသော ဦးကြည်မောင်၏ ပြောဆိုချက်ကို အာဏာပိုင်တို့က ခြိမ်းခြောက်မှုတခုအဖြစ် သဘောထားခဲ့ကြသည်။ (ဓာတ်ပုံ – Nic Dunlop)
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က နေပြည်တော်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃ရ ခု၏ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံစဉ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်အေးက ထိုသို့ ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူတို့ အာဏာလွှဲမပေးခဲ့တာ အဲဒါကြောင့် လို့ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်ပြောတာ” ဟု အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သူ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
နျူရင်ဘတ် ခုံရုံး ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲကာလ NLD ကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့သူ တဦး ဖြစ်သည့် ဦးကြည်မောင်က သုံးစွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်က ဟောင်ကောင် အခြေစိုက် Asiaweek မဂ္ဂဇင်းမှ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်တဦး၏ “စစ်တပ်က စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကို NLD က တရားစွဲဖို့ လိုအပ်သလား” ဟူသော မေးမြန်းချက်ကို ဦးကြည်မောင်က “တို့ မြန်မာပြည်မှာ နျူရင်ဘတ်လို ခုံရုံးမျိုး မလိုပါဘူးကွာ” (“Here in Burma We do not need any Nuremberg-style tribunal”) ဟု ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်း ၁၉၉ဝ ဇူလိုင်လက Asiaweek တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် စစ်ထောက်လှမ်းရေး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ကလည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခု ပြုလုပ်စဉ် ဦးကြည်မောင်၏ ပြောဆိုချက်ကို မှားယွင်းကိုးကားခဲ့သည်ဟု ဦးသုဝေက ထောက်ပြသည်။
“အဲဒီတုန်းက ဦးကြည်မောင် ပြောတာလည်း အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဦးကြည်မောင်က အဲဒီလို ပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီး အဓိက ပြောခဲ့တာ။ မဟုတ်မှ မဟုတ်တာ” ဟု ဦးသုဝေက ဆိုသည်။
ဦးကြည်မောင်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
သူ၏ ပြောဆိုချက်တွင် ပါဝင်သော နျူရင်ဘတ်သည် ဒုတိယ ကမာ္ဘစစ်ကာလ အတွင်း စစ်ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သော ဂျာမန်တို့ကို အပြစ်ပေး အရေးယူသည့် နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးတခု ဖြစ်သည်။
မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ဦးကြည်မောင်၏ပြောဆိုချက်ကို နားလည်မှုလွဲခြင်း ဖြစ်သည်ဟု လက်ရှိ NLD ခေါင်းဆောင်များက ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ NLD မှာ အဲဒီလို သဘောထား လုံးဝ မရှိဘူး” ဟု NLD ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီကို ရှင်းပြသည်။
NLD ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းကလည်း “NLD ဟာ ဒီလိုမျိုး သဘောထား မရှိခဲ့ဘူး။ ဦးကြည်မောင်ကလည်း အဲဒီလို ပြောခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေးကို NLD က ထောက်ခံကြောင်း၊ ထိုကော်မရှင်သည် ခုံရုံး မဟုတ်ကြောင်း၊ အချက်အလက် ပြည့်စုံအောင် စုံစမ်းမည့် အဖွဲ့သာ ဖြစ်ကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူများဖြစ်သည်ဟု နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက နိုင်ငံတကာခုံရုံးနှင့် ပတ်သက်ပြီး လိုလားခြင်း မရှိကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှား ပြသခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်က ဦးကြည်မောင်၏ “နျူရင်ဘတ်လို ခုံရုံးမျိုး မလိုပါ” ဟူသော ပြောဆိုချက်အပြီးတွင် အာဏာပိုင်တို့က သူ့ကို ထိန်းသိမ်းလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလည်း ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်အေးက နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံ ပြောကြားလိုက်ပြန်သည်။
ထိုစိုးရိမ်ချက်ကြောင့် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပါတီ NLD ကို စစ်တပ်က အာဏာမလွှဲရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အရပ်သား အစိုးရ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ပထမဆုံး အကြိမ် တရားဝင် ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးတင်အေးက ဆက်လက်ပြောသည်မှာ တပ်မတော်အစိုးရက လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစွာ ကျင်းပပေးခဲ့သည့် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အနိုင်ရခဲ့သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အာဏာကို ဆက်လက် ချုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့က ထိုရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို အမျိုးသားညီလာခံ (၁၉၉၃-၂၀၀၇) သို့ တက်စေပြီး အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း အာဏာပိုင်တို့က ကြေညာပြီး ရွေးကောက်ပွဲတခုကို ထပ်မံကျင်းပခဲ့သည်။
ကျနော်ဗမာပြည်ကနေထွက်ခဲ့သည်မှာ ၁၈နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီ၊ စိတ်နာတဲ့ဗမာပြည်ကြီးကိုလုံးဝမေ့ပျောက်သွားပြီ၊ဗမာပြည်အကြောင်းလည်း မကြားချင်ဘူးလို ့ပါးစပ်ကအမြဲပြောနေသော်လည်း တကယ်တော့စိတ်နှစ်လုံးထဲကနေဘယ်မေ့နိုင်မှာလဲ။
ကျနော်ဗမာပြည်မှ မထွက်လာကတည်းက ဒီစစ်ခုံရုံးနှင့်ပါတ်သက်လို ့အန်ကယ်ကြည်မောင်အဲလိုပြောခဲ့ဘူးတယ်လို့ကျနော်မှတ်မှတ်ရရမှတ်မိသလိုဘဲ၊ BBC နှင့် VOA တခုခုကနေဘဲဖြစ်နိုင်တယ် ၊အဲဒီနှစ်ခုဘဲကျနော်တို ့နားစင်ရတာကိုး ၊ အကယ်၍အဲဒီတုံးကသတင်း မမှန်ဘူးဆိုရင် ချက်ချင်း correction သွားလုပ်ခိုင်းရမှာပေါ့ ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဉ္စာ၊ခလေးကစားတာမှမဟုတ်တာ ။
ဒီသတင်းကိုကြားတော့ ကျနော့ဇနီးကိုပြောဘူးသောစကားကိုမှတ်မှတ်ရရမှတ်မိသေးသည် “အာဏာလွဲတယ်ဆိုတာ အထုပ်အပိုးလွဲတာမှ မဟုတ်တာ၊ဒီကောင်တွေဒီလောက်အမြစ်သွယ်နေတာ၊ သူတို ့ရဲ့အကူညီမပါရင်၊ အာဏာဘယ်လိုလွဲမှာလဲ ၊ဘာလို ့သွားချိမ်းချောက်တာလဲ” ဟုပြောခဲ့ဘူးသည်၊ ခုတလောကျနော့ဇနီးနဲ ့ပြန်confirm မေးတော့သူလည်းဟုတ်ကြောင်း မှတ်မိကြောင်းပြောသည်။
ဟိုအရင်ကတည်းက ကျနော့ခလေးတွေကိုပြောဘူးတယ် “စစ်သားတွေဟာကျောင်းသားများကို သားသမီးချင်းမစာနာဘဲသတ်ဖို ့လက်မရွံ ့တာ၊ သူတို ့သေမှာတော့ကြောက်တာပေါ့ ဘယ်အာဏာလွဲရဲမှာလည်း”
ပြီးတာလဲပြီးသွားပါပြီ၊ reverse မှလုပ်မရတာ၊ အများပြည်သူနာတာပိုအချိန်ကြာသွားတာတခုဘဲပေါ့။
နိုင်ငံရေးသမားများသည် ထာဝရရန်သူမရှိ၊ယနေ့ရန်သူသည်နက်ဖြန်မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်သလို၊ယနေ ့မိတ်ဆွေသည် နက်ဖြန်ရန်သူလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို ့သည်မနေ ့ပြောသောစကားကို ယနေ ့ပြောသောစကားနဲ ့ပြန်ချေပနိုင်သည်။
မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည်ကိုလ့်မဲဖြင့် ကိုလ့်ရှေ ့ရေးကိုဆုံးဖြတ်ပါ၊ မဲသွားမပေးဘဲသူများ၏မဲဖြင့် ကိုလ့်ရှေ ့ရေးကိုအဆုံးအဖြတ်မခံနဲ ့၊ ဒီမိုကရေစီ၏အနှစ်သာရသည် ကိုလ့်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအဲဒီတစ် မဲ ဘဲ။
တလက်စထဲ.. ရွာသားတွေကို ပွင့်လင်းမြင်သာ..သိစေချင်တာကြောင့်… ကျုပ်သိထားတာလေးတခု..ပြန်ပြောပါမယ်…။
၈၈က.. ဦးနုက..”ကျွန်တော်သာလျှင် တရားဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါကြောင်း”ကြေငြာတော့.. အတိုက်အခံတွေ..ဘာကြောင့် မပါခဲ့ရသလည်းနဲ့ ပါတ်သက်လို့ပါ..။
အဲဒီတုံးက.. အောင်၊စု၊တင် ဘာကြောင့်ဦးနုကို မထောက်ခံသလည်းဆိုတော့.. ဦးနုအစိုးရကို.. အနောက်နိုင်ငံတွေက..မထောက်ခံဘူး(အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုဘူး)လို့.. သိလိုက်ကြလို့ပါပဲ..။ အထူးသဖြင့် …ယူအက်စ်က..ဦးနုအစိုးရကို မကြိုက်ပါဘူး..။
` ကျုပ်တိုင်းပြည်မွဲရတာ၊နည်းပညာနောက်ကျကျန်ခဲ့တာ၊မတိုးတက်တာတွေရဲ့အဓိကအ ချက်တစ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရကျုပ်တို့်နိုင်ငံရဲ့ကမာ္ဘသက်တမ်းအရှည်ဆုံးပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ပါဘဲ။ ´
လူဆိုတာ ကြုံတွေ ့လာတဲ့ အခွင့်အရေး ကို ကိုယ့်အတွက် ဆွဲယူ အသုံးချ တတ်တဲ့ လူစားမျိုး ။
တခြား မကြည့်နဲ ့
အခု လက်ရှိ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် အဓိကရုဏ်း မှာပဲ ကြည့်
ဘာလိုလို ညာလိုလို နဲ့၊ ဟိုဟိုဒီဒီ မားကပ် ကြီးတွေ ကို ဝင်ဖောက်သွားတာ
ကျုပ်တို ့ပြည်တွင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်း ကို အသုံးချပြီး
လုပ်စားခဲ့သူတွေ လည်း အများကြီး
ပုံမှန်လုပ်ကိုင် သမာအာဇီဝ သမားတွေ က တော့
အသူခံ နေရစမြဲ ပေါ့
“ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ကတော့ပြောတယ်.. ကိုယ့်ပစ္စည်းခိုးခံရင် .. အရှက်မရှိအော်မနေနဲ့တဲ့.. ဒါကိုယ်အရင်ဘဝက သူခိုုးဖြစ်မှန်းကြေငြာလိုက်တာပဲတဲ့..”
“သဲအင်းဂူဆရာတော်လည်း တရားဟောပွဲတခုမှာ သူဆိုးခဲ့စဉ်က ခိုးတာဘာဖြစ်လည်း ငါ့ပစ္စည်းကို အတိတ်ဘဝက ခိုးခဲ့လို့ ပြန်ယူတာလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ ”
“တရားပေါက်သွားတဲ့ သီလရှင်တပါး နယ်မှာသာသနာပြုစဉ် တောင်အောက်လိမ့်ကျတယ်။ နောက်ပိုင်းအဘိညာဉ်ရပြီး ဆင်ခြင်ကြည့်မှာ အတိတ်ဘဝက အကိုဖြစ်သူကို တောင်အောက်တွန်းချပြီး နန်းလုခဲ့လို့ နတ်ဘီလူးဖြစ်နေတဲ့ အကိုကပြန်ဂလဲ့စားချေတာလို့ ပြန်သိရတယ်။ (သူ့ညီရယ်လို့လည်း သိချင်မှသိမယ်၊ ဒါပေမဲ့ တွေ့လိုက်ကထဲကိုက ကြည့်မရတာမျိုးကို ဥပမာယူနိုင်တယ်)။”
အပေါ်ကစာတွေက.. အပေါ်ကလင့်ကနေ.. မန်းထားတာတွေကို..ကူးယူလာတာပါ..။
မြန်မာတွေ.. ဘာမှစိတ်ဓါတ်မကျကြနဲ့.. ဒီဘဝ.. တိုင်းတစ်ပါးကျွန် စစ်တပ်ကျွန် အင်္ဂလိပ်ကျွန်၊ တရုတ်ကျွန်၊ ဘယ်ကျွန်မဆို…။ဖြစ်ပလေ့စေ..။
ခံလိုက်ခံလိုက်.. ပြန်တောင်မပြောရဘူးနော..။ ရှက်စရာကြီးတွေဖြစ်ကုန်မယ်..။
အရင်ရှေးဘဝက.. သူတို့ကို..ကိုယ်တွေက..ကျွန်ပြုခဲ့လို့ဖြစ်တာ..။ ရက်စက်ခဲ့သလောက် ပြန်ရက်စက်နေကြတာ..။
ဘာတဲ့.. ပြုသူအသစ်..ဖြစ်သူအဟောင်း..တဲ့…။ အရိုးစွဲအောင်မှတ်ထား..။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ လက်ခံသင့်ရင် လက်ခံလိုက်၊ မခံနိုင်လို့ မျက်ကန်းတစ္ဆေ ဘင်လာဒင်လို လုပ်တော့ သူ့ဘဝဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းသလဲ၊ သူချစ်တဲ့ဘာသာ၊ သူချစ်တဲ့နဲ့တိုင်းပြည် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ခံရသလဲ။ ဘယ်အရာမှ တဖက်စွန်းမရောက်စေနဲ့ အလယ်လမ်းကိုရွေး။ အဲဒီလမ်းဆိုတာ မျဉ်းကြောင်းလေးတကြောင်းလို ကျဉ်းကျဉ်းလေးမကဘူး၊ လမ်းမကြီးလို အကျယ်ကြီး လူးသာလွန့်သာရှိတယ်…။ ခွင့်လွှတ်သင့်သူကိုလွှတ်၊ မေ့သင့်သူကိုမေ့၊ ဆော်သင့်သူကိုဆော်၊ မုန်းသင့်သူကိုမုန်း၊ ဝမရှိဘဲ ဝိမလုပ်နဲ့၊ ဝရှိတိုင်းလည်း မဝါးချနဲ့။
မှတ်ချက်။ သဲအင်းဂူဆရာတော်အကြောင်းရေးရာတွင် ခိုးသည်ဟု မှားယွင်းစွာ ရေးမိသည်။ အမှန်က ဒမြတိုက်သည်။ အတိတ်က သူ့ထံကလုခဲ့လို့ ကိုယ့်ပစ္စည်းပြန်ယူခြင်းလို့ ဖတ်ပေးရန်။
မကြားဘူးတဲ့သူတွေရော၊ကြားဘူးတဲ့သူတွေရောထွက်လာလိုက်ကြတာ။ ဝှား….။ အဲဒီထဲကကြံ့ဖွတ်တော့နိုင်ဦးမယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်။ ကိုုယ်တွေလိုပြည်သူသေးသေးလေးကတောင်သိတယ်။ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ ပါတီဝင်တွေကမသိကြဘူးလား။ သိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပါတီတေ ွငွေအကုန်ခံပြီးထောင်နေတာလဲ။ စည်းလုံးမှုမ
ရှိလို.ပေါ့။ ကိုယ်ဘဲတော်တယ်၊ကိုယ်ဘဲကောင်းတယ်ထင်နေလို.ပေါ့။ စိတ်ပျက်စရာတွေများပါတယ်။ မပြောချင်ဘူး…။
ဟုတ်ပ၊ ဟုတ်ပ၊ ဟုတ်ပ၊
စိတ်ပျက်စရာ လက်ခမောင်းခပ် ဘဝင်တွေမြင့် ငါတစ်ကောကောပြီး ငါတော်တယ်တတ်တယ်လုပ်လိုက်ကြ
တာ ခုတော့ဘယ်နှယ်ရှိစ၊ နွားကွဲတဲ့နောက်တော့ သွားပီပေါ့။
When Obama come up and start the engage policy , NLD tone also changed. I wish NLD to be ahead of western policy. Not follower.
အန်အယ်ဒီခေါင်းဆောင် (ဦးကြည်မောင်)ကို သတင်းထောက်က အာဏာရရင် စစ်ခုံရုံးဖွဲ့မလားမေးတော့ ဖွဲ့မှာပေါ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ တလောကတင် ပြည်ပမီဒီယာတွေမှာ အဲသလိုမပြောခဲ့ကြောင်း ဖတ်ရပါတယ်။
the same problem with what Daw Su said about tourist.
If I’m not mistake , Daw Su against tourist to come to Myanmar and said Don’t come. After that it is changed and NLD said , she never said that.
If anyone know , please share .
I wish to know all of your opinions on “Should go or should not go to Myanmar ” regarding tourist. thanks .